အခု ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆရာတေးရဲ့ ဘလော့မှာ တော်တော်များများပါပြီးပါပြီ။ သူ ဖော်ပြထားတာတွေ ရေးသားထားတာတွေကလည်း တော်တော်လေးပြည့်စုံလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲကမှ ကျွန်တော့်အတွက် (သို့) ကျွန်တော်တို့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ တရားတော်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
သင်ကြားရေး မင်္ဂလာ ၄ ပါး
တတ်ကောင်းတတ်ရာ ဟူသမျှကို ၊ ကြားမြင်သုတ ရှိပါစေ။
အိုးအိမ်တည်ထောင် ၀မ်းစာရေးနဲ့ ၊ အသက်မွေးဖို့ အတတ်သင်လေ။
လူနှင့်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို ၊ ကောင်းစွာသင်ကြားနားလည်စေ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ယခုမျက်မှောက်ခေတ်ကြီးမှာ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို အဆက်မပြတ်သင်ကြားလေ့လာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပညာတတ်ရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးဘဲ လူနဲ့ ပက်သက်တဲ့လူ့ကျင့်ဝတ်များကိုလည်း နားလည်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာဘယ်လောက်တတ်တတ် လူ့ကျင့်ဝတ်နားမလည်ရင်တော့ လူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ "မှန်ကန်ယဉ်ကျေး ချိုသာအေး" - စကားပြောဆိုရာမှာလည်း သူတစ်ပါး နားဝင်ချိုအောင် ချိုသာယဉ်ကျေးတဲ့ စကားများကိုသာ ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာတော်တစ်ပါး အမိန့်ရှိသွားသလို "ကိုယ်မကြိုက်တာကို သူများကိုလည်း သွားမပေးပါနဲ့ ... အဲဒါဆိုရင် မင်း စိတ်ချမ်းသာပြီ" တဲ့။ တကယ်ရိုးရှင်းလှတဲ့ အယူအဆလေးပါ။ ကိုယ့်ကို စတာနောက်တာ မကြိုက်ရင် သူများကိုလည်း သွားမစ ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို လာဆဲတာမကြိုက်ရင်၊ သူများကိုလည်း သွားပြီး မဆဲပါနဲ့ လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်မကြို့က်တဲ့ အရာတွေကို သူများကို လိုက်မပေးပါနဲ့ ... အဲဒါဆိုရင် သင် စိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ။
ပြုစုရေး မင်္ဂလာ ၃ ပါး
မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် မိဘကြွေးကို၊ ကောင်းစွာဆင်ပေး ၀တ်ကျေကျေ။
ကြွေးသစ်ချကာ သားနှင့်မယား ၊ မြှောက်စားချီးမြှင့် ၀တ်ကုန်စေ။
အလုပ်တာဝန် မလစ်ဟင်းနဲ့ ၊ အပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ပါလေ။
စည်းစိမ်ကိုပေး ပြုစုရေး ၊ မြော်တွေးသုံးချက်ပေ။
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တောင်မှ သူ့မိခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကို တရားဟောပြီးဆပ်တာ နို့တစ်လုံးဖိုးပဲ ကျေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သာမန်လူသား ပုထုဇဉ်တွေဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ဝေးကွာလွန်းလှပါတယ်။ လူမချမ်းသာရင်နေပါစေ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ... မိဘကို ဒီအချိန်မှာ တစ်ခြားအရာတွေနဲ့ ကျေးဇူးမဆပ်နိုင်သေးရင်တောင်မှ ကိုယ့်မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင် နေပြတာလည်း မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို စာဖွဲ့ပြီးရေးမယ်ဆိုရင် ရေးလို့ဆုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိဘနှစ်ပါးကို မသေခင်မှာ ပြုစုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ဟာ အရေးကြီးဆုံး မင်္ဂလာတရားတော်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြွေးဟောင်းဆပ်ပြီး ကြွေးသစ်ချကာ ကောင်းစွာလုပ်ကိုင် ရှာဖွေကျွေးမွေးရပါဦးမယ်။ မိဘတစ်လှည့် ဖြစ်သွားသူကလည်း မိဘ ၀တ္တရားနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေကျွေးမွေးသလို မိမိကိုယ်တိုင် သားသမီးအဖြစ်တလှည့် မိဘကို လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးရာမှာလည်း သားသမီးဝတ္တရားနဲ့ အညီ ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ အဲလို ရှာဖွေကျွေးမွေးရာမှာလည်း သမာအာဇီဝကျကျ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ကိုင်မှသာ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ ညီမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ မင်္ဂလာတရားတော် (၇) ပါးကို ဆရာတော် ဦးပညာသာမိ စာအုပ်ပါ ဒဂုံဦးထွန်းမြင့်၏ ကဗျာလေးများနှင့် ကျွန်တော်သိထားသမျှ ဗဟုသုတ အတွေးအမြင်များကို ဖြည့်စွက်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးဖြစ်လာဖို့ တိုက်တွန်းပေးတဲ့ ဆရာတေးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများအားလုံး သုံးဆယ့်ရှစ်ပါးသော မင်္ဂလာတရားတို့ကို လိုက်နာပြုကျင့် နေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးနိုင်မယ် ထင်တဲ့သူတွေကိုပဲ Tag လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ရေးစေချင်တာကတော့ မိုးတွေရွာရင် တုန်းက ပို့စ်လိုပဲ အားလုံးကို ရေးစေချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ .... "ဒီကောင် သူများကို ဒုက္ခလိုက်ပေးတယ်" ထင်နေမှာစိုးလို့ပါ :)
Nay Min Thu 6:56 pm
Great post. Really love it.
We should really do good deeds before we check out from this world. After all, life is really short.
MELODYMAUNG 11:16 am
ကိုချမ်းရေ tag ထားတော့လဲ ရေးရတာပေါ့ ဒါပေသိ ၀န်ခံရရင် အဲဒီတရားအကြောင်းပြောပြီဆိုတာနဲ့ လူက နွားကိုပလာတာကျွေးသလို ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တော့လဲ ငါရေးတဲ့ အခါအမှားပါကောင်းပါရင် ခွေးလွှတ်နော် အဟီး :P
CMS 8:26 pm
nay min thu ... welcome bro and thx for ur comments :)
melodymaung ... လူဆိုတာ မှားဖူးတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲဗျာ။ အမှန်ဆို အမှားတွေကပဲ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်လား :)
ဖိုးချမ်း ရေးပြီးပြီနော် တတ်သလောက်တော့ ရေးထားပါတယ်။ :)
pandora 8:25 am
ဖိုးချမ်း ရေးထားတာ ခုမှ ပြန်တွေ့တယ် ကိုတေးအေးရိပ်ကနေ ကိုအန်ဒီ အဲဒီကနေ ပန်ဒိုရာ ရေးထားတယ်.. သြော်.. အတက် လောက အတက် လောက...